Eli phepha lixhomekeka ngolwazi lwebhayisili kwimbali yesiFrentshi. Kwiincwadi malunga neeMpi zeNapoleonic, nqakraza apha .
Iincwadi eziphezulu kakhulu zeencwadi, kunye nebhonasi yabantu abafuna enye incwadi kwiziganeko zakutshanje (oko, ndiyavuma, ngokukoqobo ukukopela.)
I-Concise History yaseFransi nguRoger Price: Icandelo leCambridge Concise Histories series, (kunye nokuxhunyelelwa kwenye incwadi kuleluhlu), lo mbhalo ubude obuphakathi buqhutywe kumnandi kodwa ngezinye iimbali eziyinkimbinkimbi. Uhlobo lwesithathu lunesiqendu esongezelelweyo kwiFransi yanamhlanje.
I-Cambridge Illustrated History of France nguEmmanuel Le Roy Ladurie noColin Jones: Njengoko ndize ndibhale oku ndicinga ukuba le ncwadi ayibhaliwe, kodwa ndiyakuvuyela ukuyibona ikhona! Ingcaciso yam yesicatshulwa kwimbali yaseFransi, kunye nolwahlulo olubanzi kunye nento eninzi ebonakalayo.
Imbali yeFransi yamanje: Ukusuka kwi-Revolution ukuya kwiNamhlanje Yenza nguJonathan Fenby: Imbali yesiFrentshi kwixesha laseNapoleonic liyinto engathandekiyo kwixesha eliphambili, kwaye ndiyathemba ukuba le ncwadi ithengisa yona. Okulungileyo kwiYurophu YaseYurophu kunye nabaxhasi bamandulo kunye neFransi.
Ufuna ukuqala ukufunda ngembali yesiFrentshi, kodwa awuqinisekanga ukuba ungaqala kuphi? Siye sawaphula iincwadi ezibalaseleyo esiziphethe kwimbali yesiFrentshi kwaye sahlula kwiintlu ezintathu; Siye saqwalasela ukugubungela umhlaba ongangoko.
I-Pre-Revolutionary France: I-Top 10
IFransi yavela ngeenxa yokuqala kwe-millennium yokuqala, kodwa olu luhlu lubuyela kubuhla beRoma ukuba zizalise zonke ii-eras.
Izimfa ezilwa neNgilani, iimfazwe zonqulo, kunye (kunye nokwenzeka) i-apogee ye-absolutism.
I-French Revolution: Top 10
Mhlawumbi ukuguquka kwimbali yeYurophu yanamhlanje, i-Revolution yesiFrentshi yaqala ngo-1789, iguqulela iFransi, ilizwekazi kunye nehlabathi. Ezi ncwadi ezilishumi ziquka enye yam intandokazi yam ebhalwe kwimbali.
I-Post-Revolutionary France: I-Top 10
Imbali yesiFrentshi ayizange iphele ngokutshatyalaliswa kweNapoleon, kwaye kukho ubuninzi bokukhangela kwiminyaka engamakhulu amabini edlulileyo ukuba ufuna iziganeko ezinomdla kunye nabalinganiswa abanomdla.
IziPhononongo kunye neeNkcazo
Ezi zilandelayo ziNkcazo zeMveliso, iingxelo ezimfutshane eziqakathekisa iinkonzo kunye neengxaki zeencwadi, ukubonelela ngempendulo kwaye kufake iinkcukacha ezongezelelweyo; baninzi banxulumanisa nokuhlaziywa okupheleleyo.
Abemi nguSimon Schama
Enye yeencwadi zam zintathu eziphezulu kwimbali ebhaliweyo, le mbali ye-revolution ukususela kwiintsuku zakuqala ukuya ekuqaleni kweNcwadi ayikho into engathandekiyo, kodwa mhlawumbi i-baroque yomfundi oselula.
I-French Revolutionary Wars nguGregory Fremont-Barnes
I-French Revolutionary Wars ivame ukuphanga kwiiNtoa zeNapoleon (ndibe netyala le nto,) ngoko ke ndaphinde ndabukeze incwadi ewabamba yodwa.
I-Oxford History ye-French Revolution kaWilliam Doyle
Ukuba ufuna ukwazi ukuba kwenzekani kwi-Revolution yesiFrentshi, kwaye kutheni, funda lo msebenzi mhle kakhulu uvela kuDoyle. Kuye kwadlula iindidi ezininzi, kwaye le ncwadi iyona nto ibhetele.
Imbali ye LEGO
Iindwendwe - Ukuhlolisisa iintlobo ezahlukeneyo
Isinyathelo sokuqala ukuba ube ngumqhubi weNASCAR